Kungani UAZ evenini-3741nazyvayut "isinkwa"?
Kukhona izimoto eziye laba uphawu kwenkathi. Babonisa isitayela esiyingqayizivele, isici Abaklami kuphela esikhiqiza zwe. Omunye sehlelo yaseSoviet yokuthuthela izimoto baba ikhumbi UAZ-3741.
Into esemqoka esihlukanisa lesi evenini kusuka eziningi kwabanye, kuhlanganise nozakwabo bakwamanye amazwe - kuyinto inegalelo elikhulu ukuguqulwa kanye Tuning. Umzimba UAZ-3741, wethiwa "isinkwa" we izimbambo transverse, ukukhumbuze omunye lisikiwe isinkwa, okuhlala isikhathi eside kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umshini ivuliwe amasondo okusezingeni eliphezulu esikuvumela ukugibela endleleni futhi imigwaqo nje ezimbi, okuyinto, ngeshwa, abaningi.
Konke kwaqala emuva ngo-1966 kakade. Amadlozi UAZ-3741, mina-452 imodeli we Ulyanovsk Automobile Plant, umnikazi kwenzakala izakhi zofuzo eqinile. izici Ukubambezeleka linqobe ngokucacile ezishaya unkulunkulukazi u-ozalweni lwakhe. Futhi kukhona yinto yokuziqhenya - survivability okusezingeni eliphezulu, ukuthembeka, injini esinamandla, isakhiwo ukhululekile, elikhulu wezimpahla gumbi - zonke lezi zimfanelo eziyigugu kakhulu singayinaki kubo. Ukumiswa onedumela hhayi abulawe, kungenxa ngokuzenzakalela imboni yasekhaya kusho okuningi.
UAZ-452 kwaba imoto yokuqala yasekhaya, motor kuhlelwe phakathi abagibeli esihlalweni somshayeli ngaphakathi emzimbeni. Nokho Ilungiselelo elinjalo kunezinzuzo zako, futhi akuyona into nemiphumela ethile engathandeki ke: abanikeze asebenza nabo ishisa kakhulu ehlobo. UAZ-3741 njengefa leli qhinga, cishe kanye nazo zonke ezinye imiklamo. Ngo-1985, ngemva kokulungiswa kancane sanikwa inombolo entsha imodeli, futhi lukhona kusukela koshintsho. Kukhona imishini embalwa enjalo eside waphila, hhayi kuphela phakathi izimoto Russian, kodwa futhi emlandweni wezwe. Ngaphandle ukuthi Willis edume inama lula kangaka, ukuqina kanye eziphansi, njengoba UAZ-3741. Intengo ke kancane kuka baba yizinkulungwane ezingamakhulu amane, ke liyazikhulumela, futhi iphakeme umthengi izakhiwo, kwenza lo mshini esisemqoka abalimi kanye osomabhizinisi.
Isitolo, kanye yonke imoto, elingenalo iyiphi frills, okuvumela ukuhlomisa kuye ngesicelo umnikazi. Amasondo Ungabeka ububanzi emikhulu, bona uvumelane ngaphansi kwamaphiko, futhi unqamule izwe, futhi ngakho akukubi, kuyoba akukho okubi kunalokho i Suv.
izilungiselelo abathandwayo futhi injini, okuyinto ngaphansi hood ka UAZ-3741. Imininingwane bathi abadali lokhu ikhumbi kwezinye izinqumo zayo ngaphambi kwesikhathi. Imoto akakwazi ngokuthi ultra-ongaphakeme - ibusa 15-16 amalitha uphethiloli ngayinye amakhilomitha 100, kodwa ukusho ukuthi lesi sibalo ezimba, akekho umuntu ujike ulimi ngisho esikhathini sethu. Umqulu ukusebenza 2.7 amalitha, namandla - 110 amahhashi, ukuthi imoto ezimbili-ton, ngokuvamile, evamile. SuperSpeed futhi ngeke uqambe, kodwa hhayi esidalelwe yamahhashi. Kodwa ukulayisha UAZ-3741 kungaba 1 ton of 200 amakhilogremu futhi ungakhathazeki ukuthi umthwalo onjalo akazange 'ukudonsa'. Braking uhlelo ezimbili-wesifunda, futhi ngenxa yalokho okuthembekile.
Ngokuvamile, i-high ukugijima kanye namasistimu okusebenza izici Eqinisweni obucacile ukusetshenziswa imishini enjalo yibutho, khulula kanye kwezinsizakalo zokwelashwa.
Kungakhathaliseki ukuthi kuhle kangakanani le moto, cishe, ekukhiqizeni izosuswa maduze. Isizathu sokuba kungalingani phakathi sokulondeka namazinga yesimanje European futhi, ngenxa yalokho, ukungakwazi egunyazwe emhlabeni jikelele.
Ukukhetha nokuthenga kwe-Mitsubishi e-Izhevsk.
"Inkosazana we Khrushchev": nabalingisi we ifilimu
Iminyango "Granite": ukubuyekezwa, Ukucaciswa
Cool shades of izinwele: incazelo, izici Iphalethi oluthandwa
Dzhuliya Chayld: A Biography, amabhayisikobho kanye nemiklomelo
Uma kuza ubudala eRussia ngokuziqhathanisa namanye amazwe
Chantilly Tiffany: isithombe kanye nencazelo zohlobo amakati